Misondrotra ambony hatrany
Koa tahaka ny nandraisanareo an’i Kristy Jesosy Tompo, dia mandehana ao aminy araka izany koa. Kol 2:6
Midika io fa tokony andinika ny fiainan’i Kristy ianao. Tokony hodinihinao amim-pahavitrihana kokoa mioatra noho ny fanalinanao ireo lafim-pahalalana eo amin’ny izao tontolo izao izany. Man-danja lavitra mantsy ny zava-tsoa maharitra mandrakizay noho ny zava-mahaliana tsy mahatra ety ambonin’ny tany raha ankasitrahano ny hasarobidy sy ny fahamasinan’ireo zavatra mahatra mandrakizay, dia ho vitanao ny hampiasa ireo eritrritra mahatra indrindra sy ny herinao tsara indrindra ho fahamanan’ny olana izay mahakasika ny fahasamabarano maharitra mandrakizay. Ny zava-mahaliana hafa rehetra mantsy dia zava-poana ihany raha ampitahaina amin’izany. Anananao ilay modely dia i Kristy Jesosy. Mandehana araka izay nandehanany koa.
“Amin’ny finoanareo dia manehoa fahatanjahan-tsaina” (2 Pet. 1:5). Tsy misy ny teny fisakana omena an’izay mihemotra ny tanjon’ny apostoly ao amin’ny fanambarana nataony dia ny ampirisika ny mpino androso hatrany ao amin’ny fahasoavana sy ny fahamasinana. Efa milaza azy ho mihaina ny fahamarinana izy ireo manana ny fahalalana ny finoana sarobidy, efa mpiray fomba amin’Andriamanitra. Raha mijanona hatreo kosa anefa izy dia ho veriny ny fahasoavana efa noraisiny.
Ny fahamarinana dia fitsipika am-perin’asa izay mamolavola ny fo sy ny fiainana mba hisy hatrany ny fihetsehana mikendry ny any ambony. Isaky ny dingan’ny fiakarana, dia mahazo aim-baovao manetsika azy ny sitrapo. Manjary manahaka bebe kokoa ny saina sy ny toetran’i Kristy ny toetry ny fitondrantena. Ny Kristianina mandroso dia manana ny fahasoavana sy ny fitiavana izay mihoatra ny fahalalana rehetra, satria latsapaka lalina ao amin’ny fahalia-nany ny fisainan’Andriamanitra eo amin’ny toetran’i Kristy. Arakaraka ny hiakarany no hankasitrany ny voninahitry ny Tompo ery an-taompon’ny tohotra ka dia ho voasintona hiakatra ambonimbony kokoa hatrany izy ho amin’ireo tanjona mendrika kokoa asehon’i Kristy.
Ny zana-tohatra rehetra mankany an-danitra dia tsy maintsy hitsahana tsirairay; ny dingam-pandrosoana iray no manatanjaka antsika ho amin’ny iray manaraka. Ny hery manovan’ny fahasoavan’Andriamanitra eo amin’ny fon’olombelona dia asa izay vitsy ihany no mahatakatra azy satria malaina loatra izy ireo hanao ny ezaka ilaina tena ilaina.